Gudoomiyaha gobolka Banaadir oo masuuliyiin kale Nairobi ku la kulmay. – The Voice of Northeastern Kenya
Gudoomiyaha gobolka Banaadir oo masuuliyiin kale Nairobi ku la kulmay.
Duqa Magaalada Muqdisho ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Cabdirixmaan Cumar Cusmaan (Eng.Yarisow) ayaa magaalada Nairobi ee dalkani Kenya wuxuu kula kulmay Danjiraha Dalka Maraykanka ee Soomaaliya Mudane Donald Y. Yamamoto iyo Madaxa Hay’ada USAID Jeffry Bakkan.
Guddoomiyaha ayaa la wadaagay masuuliyiintaas horumarrada uu ku tallaabsaday maamulka Gobolka Banaadir, dadaallada dib u dejinta barakacayaasha, caqabadaha jira ee la xiriira dhanka amniga iyo hiigsiga Maamulka ee ku saabsan dib u dhiska iyo horumarinta kaabeyaasha dhaqaalaha.
Danjiraha maraykanka ee Soomaaliya ayaa bogaadiyay howlaha maamulka gobolka Banaadir wuxuuna sidoo kale sheegay inay dhankooda ka go’an tahay inay ka taageeraan dhinacyo badan oo muhiim ah si dib loogu soo celiyo hormarka iyo bilicda magaalada Muqdisho.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir wuxuu Madaxa Hay’ada USAID kala hadlay sidii ay gacan uga geysan lahaayeen shaqo abuurka dhalinyarada ku nool Caasimadda Muqdisho iyo dhismaha golleyaasha deegaanka ee dhowaan la qorsheynayo in laga hirgeliyo maamulka gobolka Banaadir.
Masuuliyiinta kale ee Guddoomiyaha Gobolka Banaadir uu la kulmay waxaa ka mid ah Danijiraha Dalka Denmark u fadhida Soomaaliya wuxuuna kala hadlay arimo ay ka mid yihiin dardar gelinta taageerada Dalkaasi uu siiiyo maamulka Gobolka Banaadir iyo ballaarinta mashaariicda horumarineed ee Gobolka.
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Soomaaliya ee Muqdisho Cabdirixmaan Cumar Cusmaan (Eng.Yarisow) ayaa safar shaqo wuxuu ku jooga dalkani Kenya, wuxuuna kulammo ku saabsan dardar gelinta barnaamijyada horumarineed ee Caasimadda uu la yeelanayo Madaxda,masuuliyiinta Beesha Caalamka iyo danjireyaasha dalalka saaxiibka la ah Soomaaliya.
← DHAGEYSO: Madaxweyne Ku xigeenka Puntland oo eedaymo u jeediyay hogaamiyeyaasha maamulada Soomaaliya.
DHAGEYSO:warka subaxnimo ee idaacada star fm 8:00 PM →